स्मार्टफोनलाई राती सुन्नेबेला चार्जमै छोडिदिनु ठिक हो त ? – Nagen News
आर्थिक विचार/ब्लग समाचार समाज
Nagen News २०७७, १५ फाल्गुन शनिबार February 27, 2021 314 Views
पोखरा, स्मार्टफोनलाई रातभर चार्जमा लगाएर छोड्नुहुन्छ ? के ब्याट्री खराब वा ब्याट्रीको आयू त छोटिँदैन ? स्मार्टफोनको ब्याट्रीलाई सकेसम्म धेरै लामो समयसम्म टिकाउ हुने गरी प्रयोगमा ल्याउन सम्भव छ ? यस विषयमा यस्तै कयौँ जिज्ञासा र भ्रमहरू विद्यमान छन् ।
यदि रातभर मोबाइल चार्जमा छाड्दै हुनुहुन्छ भने चार्जमा राख्नुअघि स्वीच अफ गर्नुहोस् ता कि ब्याट्रीमा अनावश्यक भार नपरोस् ।
अर्कोतिर ब्याट्री लामो समयसम्म टिकाउने उपाय चैं जानिराखेको राम्रो हुन्छ । स्मार्टफोनको ब्याट्रीलाई मजबुत र टिकाउ राख्ने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय भनेकै २० प्रतिशत ब्याट्री बाँकी छँदा मात्रै चार्जमा जोड्ने गर्नुहो्स् र ८० प्रतिशत पुग्ने बितिक्कै चार्जरबाट छुटाउनुहोस् ।
छिनछिनमा चार्जमा जोड्ने र छुटाउने गर्दा ब्याट्रीको आयूमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । अनि अर्को महत्वपुणर् विषय चार्जमा छँदा फोन प्रयोग गर्नु गलत तरिका हो, किनकि त्यसले फोनको तापक्रम बढाउन सक्छ । यदि फोनको ब्याट्री तातो भइरहेको अवस्थामा निरन्तर चार्ज गर्दै फोन चलाउने गर्नुहुन्छ भने त्यो हानिकारक हुन सक्छ ।
ब्याट्री ओभर हिट भयो भने जे पनि हुन सक्छ । अर्कोतिर लगातार उच्च तापक्रममा चलाउनले ब्याट्री पनि सुख्खा हुन्छ, जसले गर्दा तपाईंको मोबाइलको ब्याट्रीको लाइफ घट्नेछ ।